Ao Kenya, Tafajanona ao amin’ny YouTube Ny Rakikira Manandratra Fitiavan-Dahy Amin’ny Lahy na Vavy Amin’ny Vavy · Global Voices teny Malagasy
Ao Kenya, Tafajanona ao amin'ny YouTube Ny Rakikira Manandratra Fitiavan-Dahy Amin'ny Lahy na Vavy Amin'ny Vavy
Voadika ny 07 Avrily 2016 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Français, English
Pikantsarin'ny lahatsary YouTube-n'ny Same Love (Remix).
Nandritra ny volana febroary 2016, volan'ny fitiavana, nisy tarika artista iray avy ao Kenya iray izay fantatra ho Art Attack namoaka rakikira an-tsary antsoina hoe ‘Same Love (Remix), hiran'i Macklemore sy i Ryan Lewis mitondra ny lohateny hoe Same Love ihany ka naverina hoy toy ny hira vaovao indray. Manamarika antso hoan'ny Afrikana ny lahatsary hamongotra tanteraka ny fankahalana pelaka. Saingy tsy mendrika sy vetaveta izany ho an'ny Kenyana sasantsasany.
Efa nahazo miaiky mihoatra ny 2000 sy mpijery 240.000 ny famerenana ny lahatsary Same Love amin'ny fomba hafa (Remix) ao amin'ny YouTube. Asongadiny ao ny karazana fifandraisana eo amin'ny olona mitovy endrika fitaovam-pananahana sy ireo karazana fanamby atrehin'izy ireo andavanandro, manomboka amin'ny fanaraha-mason'ny manodidina ka hatramin'ny fitoriana eny amin'ny fitsarana azy ireny ataon'ny governemanta sasantsasany.
Toy izao ny fivakin'ny famariparitana ny hira ao amin'ny lahatsary: Hira Kenyana iray miresaka ny zon'ny mitovy endrim-pananahana, zon'ny pelaka, tolon'ny LGBT, miralenta, tolon'ny pelaka ary ny fahalalahana mahaolompirenena ho an'ny fironana ara-pananahana rehetra.
Misy fampitandremana eo amin'ny lahatsary mivaky hoe: Ahitana sary sy hafatra izay tsy voatery ho manohintohina ny sasany ity lahatsary ity.
Ao anatin'ny tononkira misy manao hoe:
Avy amin'ny zoro iray isika, mitovy fangirifiriana,
mijoroa avo, fotoana izao ho an'ny lalàna vaovao sy ady vaovao.
Mampiasa andinin-tsoratra avy amin'ny baiboly (korintiana voalohany toko faha-13) izay manasongadina ny lanjan'ny fitiavana manoloana ny asatsaran'ny olombelona ihany koa ny tontonkira.
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Fandrarana ny hira an-tsary manaitaitra sexy mampanangana fanentanana zon'ny pelaka ao Kenya,’ i Anthony Langat mamelabelatra ny sehatra sasany ao amin'ny lahatsary:
Two pretty young women exchange kisses on a park bench, one putting a ring on the other's wedding finger, as the vocalist sings: “I can't change, even if I tried, even if I wanted to.”
(Ny lahatsary)… dia mampiseho tovolahy bikany, mitanjaka ankoatra ny silipony, miankina amin'ny lehilahy olon-tiany eo am-pandriana.
Tovovavy roa mahafatifaty mifanorokorokoa eo amin'ny dabilion-jaridaina, ny iray mametraka peratra eo amin'ny manara-poana, raha mihira ny feo lafika ao amin'ny hira hoe:”Tsy afa-miova aho, na dia niezaka aza, na dia nitady izany aza aho.”
Nandrara ny lahatsary ny Kenya Film Classification Board (Birao Mpanasokajy Filma Kenyana) tamin'ny fandresen-dahatra fa “tsy mifanaraka amin'ny maoralin'ny firenena io.” Tsy nety nahombiazana tamin'ny fitakiana ny Google hanaisotra ny lahatsary ny Birao. Nilaza ny Google fa lasa fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana ny fandrarana ny lahatsary. Ao amin'ny fitsipiky ny Google, izay fikambanan'olona na andrim-panjakana maniry ny hanesorana ny lahatsary ao amin'ny YouTube dia tsy maintsy mametraka ny raharaha eo anoloan'ny mpitsara ary mametraka amin'ny orinasa ny antonta-taratasy avy any amin'ny fitsarana mitaky ny hanesorana ny lahatsary ary manamafy ny tsy maha-ara-dalàna azy ao amin'ny fari-piadidian'ilay fitsarana.
Nametraka ny birao fa tsy namoaka lisansa fankatoavana ny famokarana ny ampahany amin'ny lahatsary izay novokarina tao Kenya ilay lahatsary ary izay olona hita mizara ny lahatsary na amin'ny sehatra inona na amin'ny sehatra inona dia hotazonina ho tompon'andraikitra araka ny lalàna.
Tsy ara-dalàna ny [fiarahan'ny] mitovy endrim-pananahana ao Kenya. Ny Lalampanorenan'i Kenya dia tsy milaza mihitsy ny hiaro ny zon'ny homosexuels.Na izany aza dia manambara ny andininy faha-27 fa:
Tsy hanavakavaka mivantana na ankolaka olona amin'ny antony samihafa ny Fanjakana, tafiditra amin'izany ny fananahana, fitondrana vohoka, sata ara-panambadiana, fiaviana ara-poko na ara-tsaranga, volon-koditra, taona, fahasembanana, fivavahana, feon'ny fieritreretana, finoana, kolontsaina, fiakanjo, fiteny na fahaterana.
Araka ny tatitra 2015 ny ILGA Fikambanana Iraisampirenen'ny Lesbiana, Gay, Biseksa, Trans ary Interseksa mitondra ny lohateny hoe “State-sponsored homophobia”,[fitondrana manohana ny hômôfôbia na fankahalana pelaka] dia voarara any amin'ny firenena afrikana 34 ny homosexualité. Afrika Atsimo irery ny firenena tokana ao Afrika arovan'ny lalampanorenana voasoratra ny homosexualité. Tsy ahitana fanamarihana manokana amn'ny fisoloantenan'ny pelaka eo amin'ny zavakanto na endrika fitenenana hafa ihany koa ny lalàna Kenyana.
Na dia tsy ara-dalàna aza aza ny fahapelahana ary heverina ho fady ao Kenya, dia leferina ihany amin'ny ankapobeny ny fiarahamonina pelaka raha zara raha ahitana trangam-panasaziana tahaka izay mitranga any amin'ny firenena afrikana hafa ao aminy.
Tamin'ny 2014, Binyavanga Wainaina, mpanoratra Kenyana, mpanao gazety sady efa nahazo loka voalohany tamin'ny Loka Caine amin'ny Asa Soratra Afrikana, no olona Kenyana lasa ambony indrindra nanambara fa pelaka izy.
Ny fandrarana ity lahatsary iray manokana ity no mahatonga ny olona sasantsasany manontany tena hoe maninona no tsy voarara ny rakikira an-tsary tandrefana mandeha amin'ny radio sy televiziona kenyana miresaka momba ny olana sy ny fifandraisana eo amin'ny pelaka ary heverin'ny sasany ho “tsy Afrikana”.
Tamin'ny firesahana tamin'ny herintaona nandritra ny fitsidihan'i Obama, nanambara ny filoha Uhuru Kenyatta fa misy ny paipaika mila maka fotoana ary amin'izao fotoana izao dia tsy olana ho an'ny Kenyana izay manana olana hafa manindry kokoa ny miresaka momba azy ity.
Tamin'ny Oktobra 2015, nampitandrina amin'izay mety ho fanaovana hazalambo amin'ny pelaka ny Filoha Uhuru Kenyatta tamin'ny filazana fa manan-jò ho arovana ny Kenyana rehetra eo ambanin'ny lalàna.